Tababare Antonio Conte oo ka hadlay wararka Eden Hazard la xiriirinaya kooxda Real Madrid – Gool FM
Tababare Antonio Conte oo ka hadlay wararka Eden Hazard la xiriirinaya kooxda Real Madrid
Haaruun Yuusuf March 31, 2017
(London) 31 Maarso 2017 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Antonio Conte ayaa ka hadlay wararka xanta ah ee sheegayey inuu Eden Hazard ka tagi karo Blues.
Usbuucyadii dhowaa Hazard waxaa la la xiriirinayey inuu suuqa xagaaga u dhaqaaqi doono Real Madrid kaddib markii uu kooxdiisa Chelsea ka caawiyey inay hoggaanka u hayso kala horreynta horyaalka Premier League.
Waxaa sidoo kale jiray warar kale oo kuwaas ka soo horjeeday oo sheegayey in Hazard laga yaabo inuu saxiixo heshiis cusub oo uu ku sii joogayo garoonka Stamford Bridge, laakiin macallin Conte waxa uu hoos u dhigay wararka sheegaya inuu laacibku baxayo waxaana uu xusay inuu xiddiga xulka qaranka Belgian ku faraxsan yahay kooxdiisa Chelsea.
47-sano jirkaan ayaa suxufiyiinta maanta ugu sheegay shirkiisa jaraa’id: “Waxa kaliya oo aan dhihi karo waa Eden waa ciyaaryahan Chelsea ah, waa uu inagu faraxsan yahay, waana ku faraxsanahay isaga, ma arko wax dhibaato ah.
“Waa caadi wararka xanta ah ee ciyaaryahanka la xiriirinaya inuu baxayo waa qeyb ka mid ah xilli ciyaareedka, waa mid la isugu dayayo in lagu abuuro dhibaato oo maskaxda looga qaso ciyaaryahannada.”
Hazard ayaa dhaliyey 11 gool 26 kulan oo uu Premier League u ciyaaray xilli ciyaareedkan kooxdiisa Chelsea, laakiin waxaa wali shaki laga galinayaa laacibkan inuu kooxdiisa Blues u ciyaari karo kulanka ay Sabtida la dheelayaan Crystal Palace.
Romelu Lukaku oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha Maarso ee Premier League